ङादी ग्रुप पावरले १५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सेबोनबाट पायो अनुमति | आर्थिक अभियान
ङादी ग्रुप पावरले १५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सेबोनबाट पायो अनुमति
असार १०, काठमाडौं । ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडले १५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट अनुमति पाएको छ । कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नका लागि सेबोनबाट बिहीवार स्वीकृति पाएको हो ।
कम्पनीले हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजी रू. ७० करोड ६९ लाख को १५० प्रतिशतले आउने प्रतिकित्ता रू. १ सय अंकित दरको १ करोड ६ लाख ३ हजार ९८६ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । कम्पनीकाे विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।